Ukucwangciswa: Ukudityaniswa kokuchongwa kwe-SaaS | Martech Zone
NgoLwesithathu, Novemba 30, 2011 Lwesine, Disemba 1, 2011 Douglas Karr
Ukuba awuzange uve nge I-Schedulicity, uya .. okanye uza kuyisebenzisa kungekudala! Sele befika kubasebenzisi abali-15,000, iSchedulicity ibonelela ngalo naliphi na ishishini elibeka ukutyunjwa ukuze libandakanye ngokulula i-intanethi, i-facebook kunye neselfowuni. ukuzicwangcisela kwishishini labo. Inkqubo ifikeleleka kakhulu… $ 19 ngenyanga kumsebenzisi omnye okanye i-34 yeedola ngenyanga kubasebenzisi abaninzi. Inkampani yasungulwa kunyaka onesiqingatha eyadlulayo kwaye inezinto ezinamandla nezigqibeleleyo ezijolise kwishishini elincinci neliphakathi.
I-Schedulicity inika amandla useto lokuqeshwa kweenkampani kwii-vertic ezingama-45, kuyo yonke into ukusuka ekuhambeni kwenja, kubatywini, koochwephesha bezikhonkwane kunye nakwiisaluni zeenwele. Ukuthandwa kwenkonzo kuyazithethela, ngaphezulu kwe-60% yabathengi abatsha batyikitye ngokudluliselwa kwaye ngaphezulu kwama-500 abathengi abatsha bongezwa ngeveki. Inkonzo inezinga elimangalisayo lama-99% lokugcina!
Izinto eziphambili zibandakanya:
Ukuqeshwa kwi-Intanethi ukubhukisha.
Vumela abalandeli babhukishe ngokuthe ngqo indawo yakho page Facebook.
Epheleleyo ujongano lweselfowuni ivumela abathengi bakho ukuba babhukishe amadinga kunye nawe nanini na, naphi na.
Iiklasi, iindibano zocweyo okanye iminyhadala yeqela ziyaxhaswa, zikuvumela ukuba ulawule kwaye ugcwalise iiklasi zakho.
Inika iqonga lokunxibelelana nabathengi bakho malunga iingcali kunye nokwenyusa Ngaphezulu kwe-75 enemibala, iitemplate zesiko. Oku kubandakanya ukukwazi ukongeza umyalezo we-upsell kwizikhumbuzo zokuqeshwa!
Ishedyuli ine inkonzo yabathengi, izifundo kunye nezixhobo eziluncedo Kunye noluntu olukhulu lwabasebenzisi abanokwabelana ngeengcebiso eziyimpumelelo.
I-Schedulicity ayifuni nayiphi na isoftware efakiweyo kwisiza somthengi, iithegi zeskripthi ezimbalwa ezizisa ujongano… ukuze bakwazi ukudibanisa iwebhusayithi yakho yangoku kwimizuzu nje embalwa. Kananjalo, banazo Umdibaniso we-Facebook ukuze abalandeli bakho bacofe ishedyuli yakho kwaye ngokukhawuleza benze idinga ngqo kwi-Facebook:
I-Schedulicity ayisiyoqonga lokucwangcisa kuphela, iyanceda ukujongana nokuvulwa ngokungathi kukuluhlu. Amashishini abonelelwa ngezixhobo zokuthengisa ukubanceda bazalise ishedyuli yabo, besebenzisa inqaku lokubonelela:
Ukunyusa amadili kukwadityaniswa nesisombululo.
Lo ngumzekelo omkhulu wesithembiso se Isoftware njengesisombululo. Ngokubonelela ngesixhobo esomeleleyo kuluntu, iSchedulicity iyakwazi ukubonelela ngemveliso eyomeleleyo kwaye efikelelekayo kubanini bamashishini. I-Schedulicity ikwazisa ngenkqubo entsha yokuhanjiswa kwabathengi. Bhalisela iakhawunti yesilingo yasimahla apha I-Schedulicity.
tags: KuqeshwaIsicelo sokuqeshwaishedyuli ekwi-intanethiUkucwangciswa kwe-Intanethiishedyuli